Thenga abalandeli kunye nokuthandwa kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Disemba 12, 2018 0 IiCententarios 853
Instagram Ngenye yezona uthungelwano ezinkulu kakhulu nezithandwa kakhulu namhlanje. Inye Iqonga elifanelekileyo lokukhuthaza uphawu lwethu okanye ishishini lethu elikwi-Intanethi. Kodwa ukufezekisa obu bukho ekuhlaleni kufuneka sibe nenani elikhulu labalandeli kwaye sifumane inani elibalulekileyo ukuthandwa kwiimpapasho zethu. Kungenxa yoko le nto abasebenzisi abaninzi benethiwekhi bekhangela Thenga abalandeli kunye nezinto ezikuthandayo kwi-Instagram.
Inyani yile yokuba abalandeli kunye nezintandokazi ezininzi esinazo, kokukhona ifuthe lethu lentlalontle nelibonakalayo kolu nxibelelwano lwentlalo luza kukhula. Kungenxa yesi sizathu sokuba iinkampani ezininzi zibonelela ngeenkonzo zazo ukuvelisa amakhulu abalandeli kwi profiles. Indlela egqibeleleyo yokubeka umfanekiso esifuna ukuwuqalisa.
Ezi nkonzo zilula ukufumana. Ezinye iiwebhusayithi zinikezela ngeephakeji ezahlukeneyo zabalandeli ngamaxabiso ahlukeneyo. Kukho abanye ababhalisele inyanga nenyanga ukufumana ukuthandwa ngokuzenzekelayo kupapasho ngalunye. Ngokwenyani, ukhetho esinalo namhlanje lubanzi kwaye luyahluka.
Nangona kunjalo, ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe xa uthenga abalandeli. Iinkampani ezininzi okanye iiwebhusayithi zinikeza abalandeli be-bot ezingezizo ezokwenyani. Ezi, zidla ngokuphela ngokukhawuleza emva nje kokuba zithengile. Ngethamsanqa, ayizizo zonke ezi ndawo zithengisa i-bots, kodwa basebenzisa iiakhawunti zokwenyani abathi bazuze ukuthandwa kupapasho.
Ukuba nenani elikhulu labalandeli kunye nokuthandwa asisiyophawu nje kuphela, kodwa ikwangumthombo wengeniso kwabaninzi. Iimpawu zangaphambi kwexesha sele zityala imali kwezi profiles ethi, phantsi kwegama lokuphembelela, zibe nenani elikhulu labalandeli kunye nezinto ezizithandayo kushicilelo lwazo.
Nangona kunjalo, uninzi lwaba baphembeleli bathenge abalandeli babo kunye nezinto abazithandayo kwiinkonzo, njengoko sithethe ngaphambili, bane-bots okanye iiprofayili ezingezizo ezokwenyani. Oku kubangela ukuba iifemu ezininzi zivakalise esidlangalaleni ukuba azizukuqesha abantu abaphembelela abathengi okanye abangabasebenzisi bokwenyani.
I-Instagram yeyona intanethi intandokazi yentlalo yabantu abanomdla kubo, kuba yeyona ibonakalayo. Ke ngoko, imeko yokuthengwa kwabalandeli kunye nokuthandayo inkulu kakhulu apha kunakwamanye amaqonga afana nala Facebook okanye kwi-Twitter
Izinto eziluncedo ekuthengeni abalandeli kunye nezinto ezikuthandayo kwi-Instagram
Ukuthengwa kwabalandeli kunye nokuthandayo ngaphakathi Instagram Inika uthotho lwezibonelelo kubasebenzisi abafuna ukubeka iprofayile yabo.
Ukwanda kokuthandwa: Nje ukuba abalandeli kunye nezinto abazithengileyo zithengiwe, ukuthandwa kweprofayile kwinethiwekhi yezentlalo kuya kwanda
Ixesha lokugcina: xa uthenga abalandeli akufuneki uchithe ixesha ukwenza abalandeli abatsha ngezinye iindlela
Ukubonakala okukhulu: ukuthengwa kwabalandeli kunye nokuthandayo kunomdla kakhulu kwabo basebenzisi abafuna ukukhuthaza uphawu okanye uluhlu lweemveliso ezithile, kuba baya kufumana ukubonakala okukhulu
Ngamafutshane, Thenga abalandeli kwi-Instagram kunye nezinto ezithandwayo zinokuba luncedo olukhulu kwiprofayile yethu. Kuxhomekeke kwinani labalandeli esifunayo, ixabiso liya kuba linye okanye elinye. Nangona ukunakekelwa okukhethekileyo kufuneka kuthathwe ukuba ungathengi iiprofayili ze-bots ezingezizo zangempela.
1 Ifashoni ezinempembelelo
2 Izinto eziluncedo ekuthengeni abalandeli kunye nezinto ezikuthandayo kwi-Instagram